Wararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka ee Ukraine: Ukraine oo gurmad Cusub Heleysa
HomeWararka CaalamkaWararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka ee Ukraine: Ukraine oo gurmad Cusub Heleysa
June 23, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Khamiis 23 June.
* Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ayaa ku andacoonaya in wadanku uu taageero ka heli doono 27-ka wadan ee EU-da si uu u noqdo wadan ku biira ama u sharaxan Waxaa la filayaa in wadamada Midowga Yurub ay ku dhawaaqaan haa Ukraine shir madaxeedka maanta furmaya, sida uu qoray Sky News .
* Mareykanka ayaa soo bandhigi doona dhowr hindise oo la taaban karo oo cadaadis saaraya Ruushka, marka wadamada G7 ay kulmaan Axadda ilaa Talaadada.
Sarkaal Mareykan ah oo aan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay noqon doonto mid ku saabsan suuqa tamarta iyo sida loo “arko dhibaatada Ruushka iyo sidii saameynta caalamka inteeda kale looga dhigi lahaa mid yar intii suurtagal ah.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa laga yaabaa inuu la kulmo wakiilada Ruushka iyo Ukraine sida ugu dhaqsaha badan usbuuca soo socda si ay uga wada hadlaan dhoofinta badarka, sida ay sheegtay DPA. Wakaaladda wararka ayaa tixraacaysa ilo diblumaasiyadeed oo xiriir la leh golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, kuwaas oo lagu eedeeyay in horumar ku filan laga gaaray wadahadaladii uu Guterres si toos ah ula xaajoon lahaa Moscow iyo Kyiv.
Si kastaba ha ahaatee, waxay ka digayaan in aad loo niyad jabo, waxayna tilmaameen inay aad u yar tahay kalsoonida labada dhinac. Wararka ayaa sheegaya in wali ay jiraan caqabado dhowr ah oo hortaagan wada hadalada cusub. Diblomaasi reer galbeed ah ayaa sidoo kale shaki galiyay in Ruushku dhab ahaantii xiiseynayo wada xaajoodka.
* Ra’iisul wasaaraha Czech Petr Fiala ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu dagaal dhaqaale kula jiro Yurub isagoo u maraya dagaalka Ukraine.
Hadafka Ruushka waa inuu wiiqo oo uu khalkhal geliyo dalalka dimuqraadiga ah, Fiala ayaa sidaas ku sheegtay khudbad laga sii daayay taleefishinka habeenkii Arbacada. Waxa uu intaa ku daray in ay jirto khatar dhab ah oo ah in Ruushku uu xidho sahayda gaasta Yurub toddobaadyada ama bilaha soo socda.